XOG: Puntland oo sheegtay in ay gaadiid dagaal ka gubtay Somaliland, kana hadashay Dagaaladii u dambeeyey – Puntlandtimes
XOG: Puntland oo sheegtay in ay gaadiid dagaal ka gubtay Somaliland, kana hadashay Dagaaladii u dambeeyey
GAROOWE(P-TIMES)- Taliyaha ciidamada Keydka ee Puntland Col, Cumar Faraweyne iyo gudoomiyaha gobalka Sool siyaabo kala duwan ula hadlay Puntlandtimes.com ayaa guul ka sheegtay dagaal fiidnimadii xalay ka dhacay deegaanka Tukaraq oo ay mudo ka badan 9 bilood isku horfadhiyaan ciidamada labada maamul ee Somaliland iyo Puntland.
Taliyaha ciidamada Keydka ayaa sheegay in weerarkaas dhankooda uusan kasoo gaarin waxba khasaare ah, balse dhanka Somaliland ayuu sheegay in ay ka dileen 3 askari, dhaawacuna 14 yahay, 3 baabuurta dagaalka ahna ay gubeen waa sidda uu sheegaye.
Col, Faraweyne ayaa ku sifeeyey weerarkan in uu ahaa mid gaadmo ah oo ka yimi dhinaca Somaliland, balse ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda siddaasna ay uga jawaabeen oo aywaxyeelo soo gaartay cidii soo qaaday.
Gudoomiyaha gobalka Sool ee Puntland ayaa isna sheegay in si lamid ah khasaaraha uu sheegay Taliyahas ciidan, waxaana uu cadeeyey in waxa dhacay uu dagaal ahaa.
Ma jirto cid katirsan Somaliland oo ka hadashay arrimahan, balse warar ka madax banaan labada dhinacba waxay sheegayaan in ciidamo katirsanaa kuwa deegaanka oo la safnaa Puntland, gaar ahaana Khaatumo ay weerarkan qaadeen, kuna abaareen goob saldhig ahayd laakiin aan ka mid aheyn goobaha ay dhinacyadu isku horfadhiyeen.
Sarkaal magaciisa lagu sheegay Faysal Falaalug oo horey uga tirsanaa ciidamada Somaliland, balse ku biiray Khaatumo Cali Khalif, haddana ku biiray Puntland ayaa la sheegay in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkan.
Ciidamada labada dhinac ee Puntland & Somaliland waxay mudo isku horfadhiyaan deegaanka Tukaraq oo ay Somaliland qabsatay bilowgii sannadkan, waxaana ay diiday in ay kala baxdo ciidamadeeda, diyaar garoow dagaal oo ay gashay Puntland ayaa u muuqday mid sii yaraanaya bilihii lasoo dhaafay, xili ayaamaha doorashada ee Puntland ay ka hartay wax ka yar 90 maalmood.